Piroojektii Hojii Ijaarsa Gamoo G+2 | | Awash Tenders
Piroojektii Hojii Ijaarsa Gamoo G+2
Bedano woreda FEDB
Caalbaasii Marsaa 1ffaa
Waajjiri MWD/Aanaa Baddannoo piroojektii Hojii Ijaarsa Gamoo G+2 kan ta’e Kontoraktaraleen Hayyama hojii ijaarsa Gamoo qaban ykn hojii ijaarsa gamoo irratti bobba’an dabalatee Waann barbaachisu hunda kan guutuu fi ulaagaa armaan gadii kan guutan wal-dorgomsiisee hojjechiisuu barbaada
Ulagaalee Dorgommiif Barbaachisan
1. Hayyama daldalaa fi hayyama ijaarsa Gamowwani kan bara 2013 tti haarayoome kan qabu.
2.Tin Numbarii kan qabuu fi Ragaa VAT kan galmaa’e ta’uu qaba.
3.Adabbii Bitta mootumma irraa dhorkamuu fi Walitti bu’iinsa faayidaa hin malle argachu maddeerra bilisa ta’uu qaba.
4. Waraqaa gahumsa kontaraktaraa Misooma Magaalaa fi konstraakshinii feedraalaa ykn A/T/Konstrakshinii Oromiyaa irraa kan bara 2013 haarayome kan qabu.
5. Gibiraa kafaluusaa waraqaa qulqullinaa kan qabu.
6. Muxxanno hojii ijaarsa Gamoo fi Waraqaa beekamtii qaama hojjachiise irraa ragaa kan dhiheeffatu.
7. Waraqaa ragaa gahumsa Kontraaktarummaa Sadarkaa BC/GC6 fi isaa ol ibsu kan dhiheeffachuu kan danda’an.
8. Kontraktaraaleen Kamiyyuu Kabachiisa caalbaasii fi waaliigaltee qarshii 200,000 maallaqa callaan , Cheekii bankii ykn (CPO) dhiheessuu kan danda’an.
9. Wajjirri A/T/Galii A/Baddanno irra Sanada caalbaasii qarshii 500 Kafaluudhaan bitaachuu kan dandeeyeesan.
10. Kontraktarri Ulaagaalee Armaan Olitti ibsame guuttan guyyaa beeksifni Caalbaasiin kun Gaazexaa Kallacha Oromiyaarratti maxxanfamee bahe gaafa 15/04/2013 irraa eegalee hangaa gaafa 14/05/2013 sa’aatii 4:00 tti qofa ragaa orijinaala (1) fi footoo koppi (2) invilopi cufamen dhiheeyfchuu qabu.
11. Caalbasiin kun Guyyaa 15/05/2013 sa’aatii 4:30irratti Waajjira Bulchinsa Aanaa Baddannotti dorgomtonni qaaman bakka argamtan qofatti kan banamuudha.
12. Akkaataa walii galtee taa’ee fi yeroo jedhametti xumuree kan qeebalchisu ta’u qaba.
13. Waajjirichi filannoo biraa yoo argate caalbaasichaa guutummaan guutuutti ykn gartokkee isaa haquuf mirga guutuu qaba.
14. Sanada Caalbaasichaa qarshii hin deebine 100 kaffaluun Waajjira Abbaa Taayitaa Galiiwwanii Aanaa Baddannootii bitachuu ni dandeessu. Odeeffannoon dabalataatiif Lakk. bilbilaa 0915141308 ykn 0913786805
Hubachiisa:-dorgamtootni ulaagaalee Caalbaasiin Ibsame hunda guuttattan akka dorgomtan Cimsiinee isin beeksifna. Waajjiri Maallaqaafi Walta’iinsa Diingdee Aanaa Baddannoo.